एक्रिलिक ज्ञान - युजिंग एक्रिलिक
एक्रिलिक जेलीफिश टैंक
एक्रिलिक माछा ट्यांक
ठेगाना शाङ्घाई, चीन
शब्द "ऐक्रेलिक" अजीब लाग्न सक्छ। किनभने यो नयाँ शब्द हो जुन पछिल्लो दुई वर्षमा मुख्य भूमिमा देखा पर्यो। 2002 सम्म, यो विज्ञापन उद्योग, उद्योग, र शिल्प उद्योग मा केहि मान्छे द्वारा बिस्तारै बुझ्न थाल्छ। "एक्क्रेलिक" एक ट्रान्सिलिटेरेशन विदेशी शब्द हो, अंग्रेजी CRYLIC हो, यो एक रासायनिक सामाग्री हो, रासायनिक नाम "PMMA" हो। सामान्यतया "विशेष रूपमा उपचार गरिएको पेक्सक्सिगस" को रूपमा चिनिन्छ, यसको कच्चा माल सामान्यतया आवेदन उद्योगमा granules, प्लेटहरू, पाइपहरू, आदिमा हुन्छन्। विश्वव्यापी। ऐक्रेलिक अनुप्रयोगहरू धेरै व्यापक छन्, र तिनीहरूका आवेदन क्षेत्रहरू तिनीहरूको भौतिक र रासायनिक गुणहरूमा निर्भर हुन्छन्।
एयरोस्पेस उद्योग विमानको अगाडि वासशल्ड र साइड सन्झ्याल। एक्रिलिक सामग्री सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। निस्सन्देह, यो हाम्रो बाह्य विज्ञापनमा आवेदन बाट फरक छ। यो एक प्रकार को एक्रिलिक शीट उच्च प्रभाव प्रतिरोध, उच्च ध्वनि इन्सुलेशन र धेरै उच्च तापमान अंतर संग छ। निस्सन्देह, मूल्य धेरै महँगो छ।
एक्सप्रेसवे ध्वनि प्वाइज हाइवे को बीच ध्वनि इन्सुलेशन बोर्ड को लागि प्रयोग गरिन्छ, शहर को उच्च गति, र घरहरु को बीच दूरी। यो पनि असर-प्रतिरोधी, अत्यधिक ध्वनि-इन्सुलेशन ऐक्रेलिक पाना पनि हो। निस्सन्देह, यो विशेष आवश्यकता अनुसार पट्टी ढाँचामा प्रसोधन गरिनेछ। तिनीहरूमध्ये, पट्टी स्ट्रिप्सको भूमिका, एक छ पारगम्यता। यो पूर्णतया पारदर्शी छैन, चालकको भिजुअल थकानको कारण: दोस्रो हो पक्षीहरूको रक्षा गर्न तेस्रो छ: तेस्रो तेस्रो तर्फबाट सजिलैसँग दुई पक्षहरू हेर्न सकिन्छ।
1, फर्नीचर, ट्याबलेट पसल, कुर्सियां (प्रायः रङ प्यानलहरूमा प्रयोग गरिन्छ):
2, खानपान उद्योग: फल प्लेट, ट्रे, सबै प्रकारको खाने को बर्तन (सुन्दर, पर्यावरण अनुकूल, औपचारिक हाईडाइड र अन्य सामग्री औसत प्लास्टिक भन्दा कम छ);
3, कस्मेटिक्स, सजावट उद्योग: कास्मेटिक प्याकेजिङको एक किस्म। श्रृंगार ट्रे, शैम्पू बोतलें, कागज बक्से, आदि, सजावट।
सिभिल अनुप्रयोगहरूको क्षेत्रमा, यो सामान्यतया यसको उपस्थिति चमक, मोटाई एकरूपता, रंग रङ, उच्च तापमान प्रतिरोध र यति बढी ध्यान दिन्छन्। यो पनि ऐक्रेलिक को लागि एक ठूलो प्रयोग हो। विदेशी बजार र ताइवान बजारमा, ऐक्रेलिकको नागरिक बजार धेरै ठूलो छ, र लगभग हरेकको जीवन एक्रिलिक सामाग्रीबाट बेवास्ता छ। मुख्य भूमि को सिभिल क्षेत्र मा, यो अझै पनि कार्यान्वयन को चरण मा छ।
विज्ञापन उद्योगमा ऐक्रेलिकको अनुप्रयोग यसको धेरै महत्त्वपूर्ण प्रयोगहरू मध्ये एक हो। एक्क्रेलिक केहि विशेष उत्कृष्ट प्रदर्शन को कारण। केहि आर्थिक शक्तिको साथ सुरू गर्नुहोस्। विकासको लागि दृष्टि संग कम्पनीहरु को लागि आउटडोर प्रचार को प्रचार। पहिलो, यो मुख्यतया विदेशी-वित्त पोषित उद्यमहरू, र त्यसपछि केहि प्रसिद्ध घरपरिवारहरू। विशेष रूप देखि एक श्रृंखला प्रकृति संग कम्पनीहरु को लागि। उदाहरणका लागि, म्याकडोनाल्डको, केएफसी, पिज्जा हट, स्यानोपेक ग्याँस स्टेशन, पेट्रोचेना ग्याँस स्टेशन, ए लि केक, होलील्यान्ड, सीआईटीआईसी औद्योगिक बैंक, हजारौं स्वाद, हाइइशू घर र अन्य। त्यसोभए किन यी मशहूर ब्रान्डहरु को बारे मा एक्रिलिक सामाग्री को अत्यधिक अत्यधिक मानिन्छ? चीनमा बाह्य विज्ञापन उद्योगमा हाल कुन विज्ञापनहरूको विज्ञापन प्रयोग गरिन्छ भनेर हेरौं:
1. धातु वर्णहरू जस्तै फलाम, तांबे र स्टेनलेस स्टील;
3, नीयन रोशनी, एलईडी रोशनी;
माथिल्लो धेरै सामग्रीमा एक्क्रेलिक यसको स्पष्ट फायदा छ:
1, उच्च चमक को उपस्थिति। उज्ज्वल रङ, दस वर्षभन्दा बढीको लागि रङ्ग रहन्छ। यो धातु वा इनकिकेट द्वारा बेजोड छ। उदाहरणका लागि, गत 82 वर्षमा म्याकडोनाल्डको बीजिंगले बनाएको एउटा ऐक्रेलिक प्रकाश बक्स एक नयाँ जस्तै हो। विशेष रंग संतृप्ति र स्थायित्व र उत्कृष्ट बाह्य चमक सूर्यको रोशनीमा क्रिस्टल स्पष्ट छ। स्पार्कलिंग को भावना ग्राहक को धारणा हो। एक्रिलिक छनौट गर्न को लागी एक महत्वपूर्ण कारणहरु।
2, सामग्री आफैलाई प्रकाशमा बलियो छ: बाह्य विज्ञापन उद्योगमा प्रयोग गरिएको ऐक्रेलिक पानामा अत्यन्त राम्रो लाइट ट्राफिक छ, साथै निर्मित निर्मित स्रोत, रातमा चमक पनि र नरम छ। नीयनसँग तुलना, ऐक्रेलिक शब्द सम्पूर्ण प्रकाश हो, नियन प्रकाशको विपरीत, रेखा चमक छ। र नीयन लाइट लाइनहरु भन्दा नरम।
3, निर्मित प्रकाश स्रोत: कुनै बाह्य तारिङ, क्षति गर्न सजिलो छैन। सबै भन्दा पहिले, कुनै बाह्य तारिख छ, जो समस्या समाधान गर्दछ कि नियन तारिङ बाहिर सुन्दर छैन। उपयोगिता मोडेलले समस्यालाई हल गर्दछ कि तार र प्रकाश स्रोत हवामा उजागरिएको छ र छोटो-सर्किट भएको छ। र। एक्रिलिक को राम्रो सील को कारण, यो समस्या को हल गर्दछ कि लाइट बरसात दिनों मा नहीं बदलन सक्छ। वर्षा र हिमपात सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ।
4, एक्रिलिक शब्द, हल्का बक्स स्थिरता: यस बिंदुमा, ऐक्रेलिक क्यारेक्टरहरू, लाइट बाकस मोल्डिङ थर्मोफर्मिङ हो, एक्रिलिक पाना गरम हुन्छ पछि, एक-पटक सम्पीडन मोल्डिंग वा प्लास्टिक मोल्डिंग ढाँचामार्फत, त्यहि धेरै सेटहरू वा धेरै मोल्ड सेट देखि उत्पादहरु त्यहि हुन्। यसको अतिरिक्त, उही रङ नम्बर (जस्तै: 136 रातो) को रङ, दुई बोर्डहरू रंगमा एकदम स्थिर छन्, र नग्न अनुहार बिच्छेद हुन सक्छ। यी दुई इन्द्रमा, रंग स्थिरता र निर्दिष्टीकरणको स्थिरता कर्पोरेट छविको पदोन्नतिलाई सहयोग गर्दछ। यो स्टोर को सजावट र सजावट को एकरूपता पनि सुविधा गर्दछ।
5, भौतिक प्रदर्शन स्थिर छ, उच्च र कम तापमान विरूपण गर्न बलियो प्रतिरोध। यो आउटडोर विज्ञापन उद्योगमा लागू गरिएको ऐक्रेलिक को एक महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। सबैभन्दा पहिला, यो एक बलियो यूवी प्रतिरोध छ, जो यो कारणबाट खारेज गर्दैन भन्ने एक हो। यसको अतिरिक्त, यो 70 डिग्री को तापमान को उच्च तापमान सामना गर्न सक्छ। कम तापमान - 50 डिग्री सेल्सियस। यस अंतराल मा, कुनै बदलाव नहीं हुनेछ। चीनको अधिकतर क्षेत्रहरूले यो तापमान फरक फरक पर्दैन। त्यसो भए, व्यवसायहरूले यसलाई विश्वासको साथ प्रयोग गर्न सक्दछ।
6, धेरै बलियो मेकानिकल प्रोसेसिंग
(1) थर्मोफर्मिङ प्रदर्शन: केवल 70 डिग्री सेल्सियस र 50 डिग्री सेल्सियस बीचको वर्णन गरिन्छ, तापमान एक निश्चित उचाइ पुग्न सक्छ, र ऐक्रेलिक पाना छिटो तुरुन्तै। नरम भएपछि, यो ढाँचा को आकार अनुसार अनुसार विभिन्न आकृतिहरूमा ढाक्न सकिन्छ, र सामान्य तापमानमा ठुलो भएपछि, भौतिक गुणहरू स्थिर छन्।
(2) बलियो machinability: ऐक्रेलिक पाना काटन, काटन, ड्रिलिंग र अन्य उपकरणहरू द्वारा आकार गर्न सकिन्छ। लचीलापन अपेक्षाकृत राम्रो छ। सामान्यतया, ऐक्रेलिक पानाहरू दरबार (plexiglass तुलना गर्न) छैन।
सारांशमा, एक्क्रेलिकले धेरै फाइदाहरू छन् र यसको बाहिरको विज्ञापन आउटडोर विज्ञापन उद्योगमा लागू हुन्छ। तर यसको कमजोरी बिना हो? वास्तवमा, क्षतिहरू निम्नानुसार छन्:
1, धातु क्यारेक्टर, इनकिजेन, नियन रोशनीको तुलनामा उच्च लागत, मूल्य धेरै पटक वा 10 पटक उच्च छ।
2, यातायात अपेक्षाकृत असुविधाजनक छ, किनकि यो जैविक सामग्री सबै पछि छ, त्यहाँ बेरलताको निश्चित डिग्री छ, ढुवानी सामान्यतया ओवरलैप गर्न सक्दैन, दबाब, अपेक्षाकृत राम्रो बाह्य प्याकेजिङ्गको आवश्यकता छ। यसैले, प्याकेजिङ लागत उच्च छ।
3. नीयन लाइट बाहिर बाहिर निस्किएको भन्दा चमक खराब छ। यसैले, धेरै उच्च इमारतहरू, र उज्ज्वल शब्दहरू, लाइट बक्सहरू चाहिन्छ। एक्रिलिक आवश्यकताहरूसँग होइन।
एक्रिलिक को फायदे र नुकसान को विश्लेषण। हामीले आउटडोर विज्ञापन उद्योग अनुप्रयोगमा यसको पोजीटिङ्ग सही रूपमा बुझ्यौं:
(1) आर्थिक शक्ति छ। एक ब्रान्ड सचेत व्यापार;
(2) चेन फाउन्डेसन कम उर्जा भवनहरू;
(3) बक्स को भाग जो नीयन रोशनी संग ठूलो बर्डर को संयोजन गर्दछ। उदाहरणका लागि, वित्त, बीमा, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, खाना, फास्ट फूड चेन्ज, लुगा, घरको उपकरण, खुद्रा श्रृंखला।
कपीराइट © शंघाई Yuejing एक्रिलिक एक्वैरियम ईन्जिनियरिङ् कं, लिमिटेड सबै अधिकार सुरक्षित।